अब आफ्नै कौसीमा खेती गर्ने कि ? कसरी गरिन्छ कौसीमा खेती जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
कसरी गरिन्छ कौसीमा खेती
कौसी तरकारी गर्न भान्छामा प्रयोग भएका नुन, तेल, दुध, चामल, मैदा आदीको प्याकेट फोहोरमा नफाली सुरक्षित राख्नु पर्छ । प्याकेटको मुख पुरै काटेर माटो भरेर कौसीमा राख्नु पर्छ । भान्छा बाटै निस्कने फोहोर पानीलाई बाटारबाल्टीमा हालेर राख्दा अझ सजिलो हुन्छ । लसुन, प्याज, टामटर, साग आदिका बोक्रा पनि एक ठाउँमा जम्मा गरेर राख्यो भने घरभित्रै व्यवस्थापन गर्न सहज पर्छ ।
सबै जना बसेर कुराकानी गरिरहेको बेलामा यसो हात सकृय राख्ने हो भने प्याकेटमा माटो भर्ने, बिउ राख्ने काम गर्न सकिन्छ। त्यसो गरे तपाईलाई भेट्न आउने आफन्तले पनि यस बारे ज्ञान पाई फाइदा लिन सक्नेछन् । आवश्यक्ता अनुसार प्लास्टिको छानो हालेर पनि यो खेती गर्न सकिन्छ ।
के के उत्पादन गर्न सकिन्छ
कौसी तरकारी गर्न ठाउँ कति उपलब्ध छ त्यसले के के तरकारी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्छ । ८ मिटर भन्दा अग्लो ठाउँ उपलब्ध छ भने काक्रा, फर्सी, लौका, घिरौला, लगाएत लहरे बाली पनि लगाउन सकिन्छ । यदि ठाउँ अग्लो उपलब्ध छैन भने गोलभेडा, टामटर, बन्दा, काउली, खुर्सानी लगायतका तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
कम्पोस्ट (गड्यौले मल)कसरि बनाउने
समय कति दिनु पर्छ
कौसी तरकारीमा ज्यामी लगाउनु पर्दैन । गड्यौले मल बनाउन नसके मात्र बजारको मल किन्न पर्छ । बिउबिजनहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले अनुदानमा दिन्छन् । यदि निरन्तर रुपमा कौसी तरकारी गर्ने हो भने तपाईले फोहोर गाडीमा फाल्न पर्दैन र मासिक रुपमा फोहोर फाले बापत तिर्ने पैसा बचत हुन्छ। तरकारी किन्न बजारमा जाने पैसा पनि बचत हुन्छ । त्यसैले यसमा खर्च भन्दा धेरै फाइदा हुन्छ ।
बजारमा आउने तरकारी छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले विषादी प्रयोग गरि उत्पादन गरिएको हुन्छ । कौसी तरकारी आफैले उत्पादन गर्दा विषादी प्रयोग गरिन्न । त्यो आफैँले उपभोग गर्ने हुनाले पनि त्यसको स्याहार समेत पुर्याइएको हुन्छ । यो दशैंमा सुरु गर्नु भयो भने तपाइँले वर्षभरिनै आफुलाई चाहिने तरकारी घरमै फलाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै खेती गर्ने तरीकामा पनि परिवर्तन भएको छ । सामान्यतया खेतीका लागि जमीन, सिँचाइ, मलखाद, जनशक्तिलगायतको आवश्यकता पर्छ । तर, कृषि प्रविधिको विकासले परम्परागत खेतीबाट क्रमशः बोरामा गरिने ‘सेक फार्मिङ’, थोरै जमीनमा ठाडो वा चाङ लगाएर गरिने ‘भर्टिकल फार्मिङ’ हुँदै उच्चतम प्रविधि मनिएको पानीमा गरिने खेतीप्रणाली (हाइड्रोपोनिक्स) समेत प्रयोगमा आइसकेको छ । हाइड्रोपोनिक्स प्रविधि बिरुवालाई चाहिने विभिन्न पोषक तत्त्व पानीमा समावेश गरी उक्त पानीमा बाली हुर्काउने तरीका हो । त्यसका लागि बालीलाई माटोको आवश्यकता पर्दैन ।
यहाँ बोरामा गरिने खेती (सेक फार्मिङ) बारे चर्चा गरिएको छ । यस्तो खेती नेपालमा गाउँदेखि शहरबजारसम्म गरिँदै आएको छ । जमीन भिरालो हुँदा बीउ, मलखादलगायत पानीमा बग्ने समस्या हुन्छ । यसको विकल्पमा बोरामा खेती गर्ने प्रविधिको विकास भएको हो । शहरबजारमा जमीन, मलखाद तथा पानीको कमी भएको कारण यस्तो खेतीप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । पूर्वी अफ्रिकाको केन्यामा मात्रै १० लाखभन्दा बढी मानिसले यसरी गरिने खेतीलाई आफ्नो पेशा बनाएका छन् । त्यसैगरी शहरतिर गमला, पुरानो बाल्टिन, बाटा, पेयपदार्थको बोतल, माछा बेच्न राख्ने थर्मकुल बक्स, दूध, तेलको प्याकेट, पोलिथिनलगायतमा समेत तरकारीखेती गरेको पाइन्छ ।
कसरी गर्ने बोरामा खेती
सेक फार्मिङ विधिबाट खेती गर्न शुरूमा राम्रो, दह्रो (नमक्किएको) बोराको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि बोराको बीचमा पर्ने गरी केही ठूलो प्वाल भएको पाइप राख्नुपर्छ । बोरामा आवश्यक मात्रामा भरिएको माटो र मलखादसँगै माटोको उचाइ पुग्ने गरी पाइपमा समेत स–साना ढुङ्गा वा गिट्टी भरिन्छ । त्यस्तै, भरिसकेपछि बोराबाट पाइप हटाउनुपर्छ । यसो गर्नाले पाइपकै आकारमा गिट्टी भरिने हुँदा बोरामा लगाइएको बालीमा उक्त गिट्टीको माध्यमबाट सिँचाइ गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तो प्रविधिबाट बोराको चारैतिर आवश्यक प्वाल पारी सागलगायतको बिरुवा लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, नेपालमा भने सामान्यतया गिट्टीको प्रयोग नगरी पूरै बोरा वा आधामा मात्र खेती गर्ने चलन छ ।
व्यस्त दिनचर्या भएको अवस्थामा पनि यो खेतीका लागि बिहान–बेलुकाको १र२ घण्टा समय दिए पुग्छ । तरकारी फलफूल केलाउँदा निस्केको फोहोर तथा घरबाट निस्किने अन्य कुहिने पदार्थलाई मल बनाएर तरकारीमा लगाउन सकिन्छ । साथै, तरकारी, भाँडा, लुगालगायत पखालेको पानीले नै सिँचाइ गर्न सकिन्छ ।
यो प्रविधिमार्फत साग, गोलभेँडा, करेला, फर्सी, बोडी, लसुन– प्याज, कुरिलो, बकुला, सिमीलगायत तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, मौसमी वा बेमौसमी तरकारीको रूपमा बन्दा, काउली, खुर्सानी, धनियाँ, पुदिनालगायतको खेती गर्न सकिन्छ । फलफूलहरूमा जुनार, अम्बा, स्ट्रबेरी, काँक्रो, कागती र जडीबुटीहरूमा बोजो, सुप, स्टेभिया, लेमन ग्रास, घोडताप्रे, घीउकुमारी, बाबरी, कपास, बिमिरोलगायत लगाउन सकिन्छ ।
यस्तो खेती अर्गानिक किसिमले गर्दा राम्रो हुन्छ । बालीमा लाग्ने रोगकीरा नियन्त्रण गर्न, भिटामिनलगायत पोषक तत्त्व उपलब्ध गराउन गाईगोरुको गहुँत तथा साबुनपानीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, उपलब्ध भएमा तितेपाती, कालोपाती ९बनमारा०, असुरो, सिस्नु, नीमलगायतको झोल पनि छर्न सकिन्छ । अधिक पानी र शीतबाट बचाउन, बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्न प्लाष्टिक घर बनाई बिरुवा हुर्काउन सकिन्छ ।
Don't Miss it कुन राशि भएकासँग विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ ? कुनै व्यक्तिको प्रेम प्रतिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? राशिअनुसार जान्नुहोस्
Up Next गिरिराज कुखुरापालन गर्नुहाेस, घरमै बसि आम्दानी लिनुहोस्